Izambatho zePati yeGadi yamadoda - Mens Fashion Tips
Izambatho zePati yeGadi yamadoda
Kwiindibano zasehlotyeni kuseto lwangaphandle, isinxibo sepati yegadi yamadoda ilungile kwaye inesitayile amaxesha amaninzi. Kodwa ukuba uyazibuza ukuba yintoni eyimpahla yegadi, kodwa uyakumangaliswa kukufumanisa ukuba uninzi lwezinto ezibalulekileyo zolu hlobo lwempahla sele zikhona kumagunjana akho. Ngokusisiseko, iqela elifanelekileyo legadi yegadi liqukethe ukutya okufudumeleyo kweewodrophu. Ngelixa ixesha nendawo izokuyalela ngqo ukuba uza kunxiba ntoni, ukulandela imigaqo embalwa elula kuya kukunceda unxibe ngokufanelekileyo.
Isinxibo sePati yeGadi yaMadoda esisiseko
Kuba uninzi lwamaqela egadi ayenzeka kwiinyanga ezifudumeleyo, nxiba iimpahla ezifanelekileyo zexesha lonyaka. Oku kubandakanya izinto ezinje ngomqhaphu olula, isilika kunye nelineni. Imibala elula, ukushicilelwa kweetrophiki kwaye ngamanye amaxesha imibala enesibindi isebenza kakuhle kumaqela angaphandle. Cinga ngezi ngcebiso xa ukhetha impahla yakho yegadi elandelayo soirée:
indlela yokwenza umgibe kanomeva
Imithambeka : Ukuba isimemo sakho sichaza ikhowudi ethile yokunxiba, enje ngecocktail okanye isinxibo esiqhelekileyo, kuya kufuneka unxibe iibhulukhwe. Ukuba okuqhelekileyo kukhethwa, ke iibhulukhwe ezimfutshane zilungile. Kuzo zombini ezi meko, ufuna ukubonakala upolishiwe nangona uza kuchitha ixesha lakho elininzi ngaphandle. I-White, beige okanye i-madras iprinta iibhulukhwe ezimfutshane kunye neebhulukhwe ezimfutshane, zomqhaphu okanye ilinen, zibukeka zihlwili, zicocekile kwaye zipholile. Ukuba ukhetha imibala emnyama, itshokholethi emdaka kunye ne-navy blue nayo isebenza kakuhle, kunye neebhulukhwe ezimnyama ezimnyama ezidityaniswe nehempe ekhanyayo.
Yintoni onokuyinxiba ngeMbasa yeMidlalo
Imifanekiso yamadoda anxibe iimpahla eziqhelekileyo
Iibhulukhwe zelinen zeCubavera
Ihempe : Imikhono emifutshane ikugcina ukhululekile kubushushu. Umphezulu wePolo okanye ihempe evulekileyo, enamaqhosha ayathandeka kunetayi yakho ephakathi. Ncamathela kumqhaphu nakwilinen ukuze uyidlale ipholile. Enye yezinto ezintle zelinen kukuba nangona iyashwabana ngokulula, yongeza kwinkangeleko eguqukayo ethi awuzami nzima kakhulu, nokuba wenzile.
Ihempe ye-chambray engasindi yeCarhartt
Izihlangu : Izihlangu zesikhephe, isonka kunye neembadada ziyindlela eyamkelekileyo yokukhetha izihlangu. Ukuba itheko oya kulo lifuna iimpahla zokunxiba, tsiba iimbadada kwaye unamathele kwizihlangu ezivaliweyo. Amaqela egadi ahleli ebuyiswe umva kunemisebenzi esesikweni, ngenxa yoko ii-oxford ze-lace-ezinxibayo zinxibe kakhulu.
I-Mohem Poseidon yokutyibilika kwisonka
Ibhatyi : Unokufuna okanye ungadingi ibhatyi okanye iblazer, kuxhomekeke kwikhowudi yokunxiba. Idyasi yezemidlalo engasindi idityaniswe neebhulukhwe ezijongeka ngathi ipholishiwe kodwa isafanelekile kwindawo yangaphandle.
Iqhosha elinye leQhosha leBlazer eliqhelekileyo
Unayo : Iminqwazi ayinakukhethwa, kodwa ukunxiba enye kunokwenza indibano ebukekayo, enobunkunkqele. Ngaphandle kokukunika umoya omdaka, umnqwazi uyakukhusela nakwilanga. Kwimibutho yasegadini, khetha izitayile ezenziwe ngengca, njengeBoater okanye iPanama.
UTommy Bahama Panama Straw Outback Hat
Kuba isinxibo sepati yegadi ubukhulu becala sisinxibo sasentwasahlobo / sasehlotyeni esine-slant enxibe kancinci, kukho iivenkile ezininzi ezinayo yonke into oyifunayo xa udibanisa inkangeleko yakho.
Ukusuka kwiivenkile eziphezulu ukuya kwezo zijolise kwizaphulelo, awuzukujonga nzima ukufumana impahla enesitayile ngokulinganayo, efikelelekayo kwaye etofotofo.
Nazi ezinye zevenkile ezilungileyo:
I-Avenue yeSaks yesihlanu
Abayili abaphezulu beJonga
Izambatho zepati yegadi zihlala zichazwa njengemidlalo yezemidlalo yaseMelika. Nangona kunjalo kukho abayili bamanye amazwe abenza isitayile ngokunjalo. Uninzi lwabayili befashoni kunye neempawu onokukhetha kuzo ukwenza inkangeleko yakho, kulula ukuba uzive uxakekile.
Ngethamsanqa, kukho abayili / iimveliso ezimbalwa ezinokuthi ziphume ngaphambili xa kufikwa kwisitayile sepati yegadi. Banikezela ngestokhwe esimnandi seebhatyi zemidlalo, iibhatyi, iblukhwe, iihempe ezinxitywayo / ezinxitywayo, iibhulukhwe ezimfutshane kunye nezihlangu, bahlala begcina amadoda ejonge nje ukuba marn Mhlawumbi eyona nto intle malunga naba bayili kukuba zonke ziyafumaneka kwiivenkile zesebe ezikhankanyiweyo, (ngaphandle kweRiphabhlikhi yaseBhanana, eyivenkile yokuthengisa) eyenza ukuba ukukhangela kwakho kube lula. Bazi:
URalph Lauren : Yaziwa kakhulu ngeklasikhi yePolo yeklasikhi kunye neyaziwa kakhulu eyenye yepati yegadi edibanisa iziqwenga eziphambili. Kukho ingqokelela yesitayile sempahla yeBig & Tall yamadoda ekunzima ukuwalingana.
UCalvin Klein ubonelela ngezemidlalo ezemidlalo zaseMelika kunye nezinxibo eziqhelekileyo zamadoda, kubandakanya nehempe zokunxiba, iblukhwe kunye neebhatyi.
Gucci : I-brand ephezulu kakhulu yokuyila egxile kwiimfashoni zamadoda nezitayile. Amanye amaqhekeza abo okuma kubandakanya iidyasi zezemidlalo, izihlangu, ibhulukhwe emfutshane kunye neesuti.
Armani Kwizangqa zefashoni, akukho nto ilunge ngakumbi kunesuti yeArmani, ke isinxibo sepati yegadi esivela kulo myili sihlala silungiselelwe ngobuchule. Khangela nezihlangu, iidyasi kunye neetayi.
Qikelela Enye yeempawu ezizimeleyo zokunxiba ngokungaqhelekanga kunye nesinxibo samadoda, banikela ngomxube onesisa weebhulukhwe ezinxibe kunye neebhulukhwe ezimfutshane zemithwalo, kunye nehempe ezinithiweyo nezingubo.
IChristian Dior : Ingqungquthela yeklasi kunye nobugcisa, iifashoni ezivela kulo myili ziyakwenza nayiphi na indoda ukuba ibe yiphathi yegadi. Iziqwenga eziphambili zibandakanya: iihempe zokunxiba, iisuti, iibhatyi kunye nezinto ezifana namabhanti kunye neetayi.
UMichael Kors : Banxibe iimpahla zemidlalo ezinqabileyo kwezona zintle kubandakanya ibhulukhwe yelinen, iibhulukhwe ezimfutshane ezinxibayo, iihempe zokunxiba kunye neehempe ezinithiweyo eziphefumlelweyo zePolo.
Unokulindela ngokubanzi ukunxiba kwisitayile esibekiweyo, esitayile ngokukhululekileyo, esifanele amadoda amaninzi kulungile. Xa ungathandabuzeki malunga nento oza kuyinxiba kwitheko legadi, nangona kunjalo, kuhlala kungcono ukuba uphambuke kwicala lokunxiba ngakumbi kunokuba ungaphantsi, ngakumbi ukuba uzimasa umcimbi wangokuhlwa okanye umsitho okhethekileyo, njengomtshato.
Kukho iinyanga ezimbalwa zonyaka xa unokudlala isinxibo sepati yegadi, ke yenza uninzi lwazo naziphi na izimemo zasentwasahlobo okanye zehlobo ozifumanayo ngokujonga isitayile esingenakwenzeka kunye ne-debonair.
Malunga Physical Fitness Baby Care Enye Indlela Fuel Malunga Inkwenkwezi Umtshato Izipho
zeziphi ezona ndawo zihambelana kakhulu nazo
ixabisa malini imishini yokuthunga endala
uyisusa njani inki yejel kwimpahla
ingaba inqanawa yokubamba inqanawa ibamba malini
ngubani odibana ne-scorpio
ndingayifumana phi ikatana